JUBBALAND oo ku hanjabtay in cawaaqib xumo ka dhalan karta Wariiskii Amniga oo weli u xiran DF Somaliya. | HalQaran.com
Home Wararka Maanta JUBBALAND oo ku hanjabtay in cawaaqib xumo ka dhalan karta Wariiskii Amniga...
Kismaayo (Halqaran.com) – Maamulka Jubbaland ayaa waxa ay ka digeen cawaaqib xumo ka dhalan karta Wasiirka Amniga Jubbaland oo u xiran dowladda Federalka Somaliya.
Madaxweyne ku-xigeenka 1aad ee Dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa sheegay in cadaadiska fara badan oo Dowladda Soomaaliya ay ku heyso Maamulka Jubbaland ay ka dhalan karto kacdoon Bulsho.
Waxaa uu sheegay in cid alaala cidii wax ka tabaneysa madaxda Jubbaland ay ka dacwoodaan hay’adaha garsoorka Jubbaland, isla markaana Madaxda Dowladda looga baahan yahay inay xuriyadiisa siiyaan Wasiirka inta aysan cawaaqib-xumo ka dhalan.
31-kii Bishii August ayaa la soo xiray Wasiir Janan xilli uu la socday diyaarad uu Transit ku ahaay Garoonka Aadan Cadde, waxaana Booliska ay sheegeen in eedeymo tacadi Bulsho loo haysto.
Wasiir Janan & shaqsi kale oo Sarkaal Ciidan ah ayaa Maxkamad la soo taagay Axadii todobaadkaan, waxaana lagu balamay xilli kale dhageysiga kiiska Dacwadda Wasiirka.
Maamulka Jubbaland iyo Dowladda Federalka Somaliya ayaa waxaa ka dhaxeeya dagaal adag oo dhanka Siyaasadda, iyadoo Dowladda Federalka Somaliya ay diidan tahay doorashadii uu ku soo baxay Axmed Madoobe.
Jubbaland oo ka digtay cawaaqib xumada ka dhalan karta xariga wasiir janan